Walaalayaal Waxaa mahad dhamaanteed iska leh Allah SW. oo onoo sahlay inaan hanano lahaanshaha dhulka Masjidkeeno ku yaal ee 2870 Washington St. Waxaana dhamaantayo nagu waajib ah Sujuudu Shukri iyo inaan Allah ku mahad naqno.
Marka labaad waxaa mahad iska leh dhamaan Hooyooyinkii habeen iyo maalin soconayey oo albaabada garaacay si ay u hubiyaaan Masjidka uu san gacanteena ka bixin. Waxa sidoo kale mahad leh dhalinyaradii iyo cuqaashii meheradaha, ganacsiyada iyo rugta taxiilayaasha ama Uber-layda hortaagnaa in ay masjidka tabarucaad ugu aruurshaan. Waxaa sidoo kale Mahad leh Culimada iyo maamulka Masjidka oo u agaasimay arinta masjidka ama Mashruuca Badbaado si xirfadaysan, oo hawl karnimo iyo ikhlaas ay ku dheehan tahay. Alhamdulillah ayaan leenahay...
Walaalayaal, waxay ahayd January 1, 2016, Markii naloo diiday in naloo cusbaoonaysiiyo heshiiskii uu masjiku kula jiray Mulkiilihii 3381 Washington st. wuxuu noo ogalaaday oo kaliya 4 bilood oo aan meel kale ku raadsano. Laakiin waxaa hubaal ahayd in afar bilod ayey aad noogu yarayd marka loo eego dhulka ama guriga aan u baahan nahay Masjidka ahaan. si kastaba ha ahaatee Wada hadal dheer oo soo laalaabtay kadib, wuxuu Mulkiilihii noo ogolaaday inaan sii daganano ilaa November 30, 2017 iyo in kirada ay ku darsamayso 30%. Go'aankaas Masjidka laba dareen ay u lahayd; mida koowad, aad ayaan ugu faraxnay in mudada naloogu kordhiyey ilaa bisha kowyo-tobnaad sodankeeda, badaleedna waxaan aad uga naxnay meeshii kiradu ka ahayd $3000 in hal ay noqotay $5000 isla markaasna wax gorgortan ah uusan Masjidku ka gali karin; taas oo ahayd ama yeel ama meel kale raadso. Masjidku wuu ku khasbanaa inuu yeelo go'aan kaas guracan. Maxaa yeeelay waxaa uga sii cuslaa in jameecada Masjidka lakala diro.
Ilaahay fadligiis, Go'aankaas kadib, Waxaa Maamulka iyo waalidiintu go'aan lagu wada qaatay in maalin walba o Khamiis ah lasoomo Masjidkana laga wada afuro Ilaahayna labaryo inuu noo sahlo goob aan masjid ka dhinano. Kadib, Maamulka Masjdku wuxuu bilaabay talaabo adag oo lagu baadi goobayey guri iib ah ama kiro ah oo masjid noqon kara. sidoo Walidka ay caruurtooda u dhigtaan Masjidka iyo waxgarad kale oo is xil qaamay ayaa iayguna bilaabay inay raadshaan meel Masjid noqon karta oo aan iibsano ama aa kiraysan karno. Waxaa xusid Mudan inaan meelo badan aan helnay balse nasiib xumo waxaa nala ku xiray cadayn ah inaan lacag haysano ama bank oo dayn nasiinayo; Markaasna khaanada Masjidka waxaa inoogu jiray lacag ku dhawayd $150,000 guryaha aan beecinayna waxay qiima ahaan joogeen $900,000 ilaa 1.5 Million. Melaha qaar waxaa naloo arkayey dad iska ciyaaraya oo waxa ay sheegayaa aan daacad ka ahayn, Maxaa yeelay lacagta aan lashir tagayno iyo qiimaha guryaha aan beecinayno waa "Kaaf iyo Kala Dheeri" Mulkiilayaasha waxaan u sheegaynay inaan leenahay Hanti kale oo wayn oo Roxbury ku taala annagoo ula jeedna Hantida Masjida uu lahaa ee (63 Perrin St oo cabirkeedu ahaa 27,000 Sq. Ft.) Laakiinse qiima umaysan lahayn madaama ay cash ku rabeen hantidooda. Xiligaas. Talo way isku cakirantay-laakin Allah ayaan mar walba ku kalsoonayn inuusan nadayacayn.
Guryo dhawr ah oo aan heshiis bilaw ah lagalnay waxana kasocon waayeen kadib, Ilaahay Subxaanahu Watacaalaa wuxuu nagu abaal marshay inaan telefon ka helnay mid kamid ahaa dalaaliintii guryaha nala doonayey. wuxuu noo sheegay cinwaanka 2870 Washington mulkiilaha iska leh inuu u furan yahay beec. wuxuu nasiiyey Telefonkiisa iyo magaciisa. Isla markiiba waan wacnay waxaana ka dhiganay ballan. Waxaan ku kullanay Maqaaxi ku taala Jamaica Plain. Qiimaha uu ku doonayey guriga wuxuu ahaa 1.6Million cabirkiisana uu yahay 27,400 sq. ft. Heshiis dheer kadib waxaan isku raacnay inuu nooga iibiyo guriga 1.5M lacagtana aan ku bixino 5 qaybood.
Run ahaantii maalintaas ragii iyo dumarkii hawshaan wadau waxay farxeen farxad aan lamalaysan karayn oo cabsideeda leh. Waa mida koowaade, Dhulka meesha uu ku yaalo iyo qiimaha aan ku helay oo aad layaab u lahaa ku darsoo mulkiilaha oo isna ogolaaday inaan lacagtaas 1.5M ka ah u yar yarayno- Masha Allah- Tan Labaad oo cabsida lahayd ayaa ahayd inaan lacgtaas aan ka haynayn oo kaliyah waxaan gaarayn $150,000. si kastaba ha ahaatee, waxaa lasii adkeeyey Go'aankii ahaa Ilaahay halla talo saarto horayna haloo socdo ilaa aan ka guulaysanayno.
Kadib heshiiskii oo markii hore ahaa hadal ayaan loo badalay qoraal waxaana hogaanka u qabtay sharci yaqaan Masjidka iyo mid Mulkiilaha matalayey. Qorsha lacag bixinta ee 5-ta qaybood ee aan ku heshiinayn waxay noqotay sidatan:
February 24,, 2016 $150,000 - (Hormarin)
May 30, 2016 $250,000
November 30, 2016 $600,000
May 30, 2017 $250,000
November 30, 2017 $250,000
Ileen fadhi mayaalee isla markiiba gudiga Masjidka waxay shir deg deg ah ka yeesheen hanaankii lagu wajilahaa lacag aruurtaan iyo dhamaan wixi kabi lahaa. Waxaa laysku raacay in marka hore magac lo bxiyo Mashruucaan lacagta aruurinta ah Masjidka lagu dhisayo umada Muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida lagu badbaadinayo. Magacyo badan oo lasoo jeediyey kadib, waxaa qalinka lagu duugay in mashruucaan loo bxiyo magaca ah BADBAADO. Badbaado wuxuu ka turjumayaa (1) in Masjika Ilaahay ee 15-ka sano lagu caabudayey uusan xirmin jameecadiisana aysan kala tagin. sidaas daraadeedna ay Badbaadin u baahan tahay. (2) Waxaa Masjidka wax kabarata arday iskugu jirta Caruur, dhalinyaro gabdho iyo wiilal leh, hooyoyin, aabayaal oo aan dhihi karno dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada isla markanaa tira ahaan kor u dhaafaya 350 arday. Ardaydaasna waxay u baahan yihiin badbaado si waxbarashadooda diimeed iyo dhaqankoodu uusan u dayacmin. Qormada inta hartay waxaan isticmaali doonaa weedha ah " Mashruuca Badbaado"
Tilaabadii ugu horaysay waxay noqotay inaan bixino lacagta qaybta koowaad oo oo ahayd $150,000 oo markaas khasnadda Masjidka ku jiratay. waxay noqotay lacagtii u horaysay ee iibka Masjidka ku bixinno, waxayna baxday Feb 24, 2017. Kadib, Waxaa lagu hawl galay in lahelo lacagta ugu horaysa ee ah $250,000. waxaa laysku qaybiyey 5 koox oo kala aadaya xaafadaha ay Somalidu ka dagan tahay Magaalada Boston iyo Nawaaxigeeda. Waxaa lagu heshiiyey in lahelo deeq iyo daynba. Kooxahaas waxay garaaceen intii badnayd albaab walba ee Somaliyeed ee ku yaalay Boston iyo nawaaxigeeda ayagoo soconayey habeen iyo maalinba-Ilahay ayaa abaalkooda gudi kara. Run ahaantii reer Boston aad ayey ugu hiiliyeen Mashruucaan Badbaado waxaana muda yar oo kooban soo xarootay lacagtii aan raadinaynay ee ahayd $250,000. Alhamdulillah. May 25,2017 ayaan lacgataas bixinnay
Isla Markiiba ayadoon wax fasax ah la qaadan ayaa waxaa horay laga bilaabay Mashruuca wajigiisa 3-aad ahaa in lahelo lacagta dhan $600,000 (lix bilodd gudaheeda). Madaama lacagtaan ay badan tahay, Waxaa laysla qaatay in loo baahan yahay inSomalida Gobalada kale dagan oo qaylo dhaamiyo iyo Masaajidada Muslimiinta intii laga gaari karo. Imam Yusuf-Waa Imaamkeena Masjidka Altaqwa- iyo koox uu hogaaminayo waxay ku dhaqaaqeen inay tagaan Masaajiadad Somalida ee Gobalada Dalka ku yaal, gaar ahaan kuwa hoostaga Dallada wayn ee Islamic Association of North America (IANA) oo Masjidkeenu ka midyahay. Waxayna isku mareen Masaajidada kuyaal Gobaladan oo kala ah : Potrland & Lewiston,Maine, Columbus, Ohio, Nashville, Tennessee, Minnesota-oo ku dhawaad 12 Masjid aan ay katageen, Seattle WA, San Diego, CA, iyo kuwo badan oo kale. Akyaartaas oo Imamku hogaaminayey waxay ehelkoodii ka maqnaayeen dhawr bilood ayagoo ujeedkoodu ahaa kaliya Masjidkaa Ilaahay uusan dayacmin mudada yarta ee aan haysanana aan ka faa'idaysano.
Sidoo kale, Waalidiinta ay caruurtooda u dhigtaan Dugsiga waxaa kiiba lagu qoray $3000,00 oo dhayn ah oo ay heli doonaan marka dhulka (Perrin st ) la iibiyo. Waxaa intaa dheeraa in koox kamid 5 kooxood ee Boston iyo Nawaaxigeeda loo xilsaaray in dadaalkooda ay u weeciyaan Magaalooyinka fog fog ee Gobalka Mass side Worcester, Springfield, Brockton iyo kuwo kale iyo Sidoo kale gobadalda ku dhaw Gobalkaa Massachusetts. Kooxdaan waxay lug ku mareen Gobalda kale ah Burlington,Vermont -- Maine, Connecticut iyo Rhode Island. Dhamaan gobaladaas iyo magaaloyinkaas kooxdaan waxay ka qabateem shaqo runtii aan horay loo arag. Aayagoon laga aqoon ayey tageen, kadib saaxiibo ka samaysteen kadin sidii Boston oo kale albab walba oo Soamli loogu sheego ayey garaaceen, Meherad walba oo Somali leedahay ayey is dhex istaageen ayagoon Allah mooyee cidnna ka baqayn. Goboladaas qaarkood dantu waxay ku khasabtay inay ku dhaxeen.
Mudadii ay ku jireen socdaalkaan Kooxdaan khayraysan waxay ku barteen gabar iyo wiil lakala yiraahdo Shamso iyo Bille. Shamso waxay daganayd magaalada Worcester ee Gobalkaan Mass. Waxaa loogu tagay gurigeeda si ay uga qayb qaadato mashruuca Badbaado ayadoo ay ahayd maalin lasooman yahay. kadib inatay ka qayb qaadatay ayey hadana horkacday walaalihii u yimid isla markaasna hor itaajisay albaab walba ay ku garanaysay inay somali dagan yihiin. ayadoo lasocotay maalinkii oo dhan ayaa markii Afurkii saacdao ka dhimanaayeen ayaa intay guriga aaday afur aad u macaan u samaysan Walaalihii reer Boston ee Mashruucan Badbaado u socday. Waftiga Badbaado qof kamid ah oo gabadhaan horay u garanayey majirin ayadaduna maysan garanayn. Waxaa hubaal ahayd in Shamso ay Ilaahay dartiis noo garab istaagtay. Ilaahaw xifdi Shamso iyo dhamaan walaalihii nagarab istaagay.
Bille oo ah will dhalinyaro ah, waxaan ugu tagnay magalaada Burlington ee Gobalka Vermont. sidii caadi u ahayd Mashruuca Badbaado, Bille waxaan kula AlhamdullilaaH, ayagana Ilaahay waa ku guuleeyey.
Dadaalka bixinta $600,000 ayaa wali socdee, kadib markaan inta badan laga garaacay alabaabada dadkana lawaydiiyey wixii ay kaga qayb qadan karaan mashruucaan Badbaado ayaa waxaa hadana Halaalkii loo weeciyey in Masaaajiada Muslimiinta ee Gobalkan Massachusetts fooda ladaro wixii Allah naga siiyanaha aan kasoo qaadano. Masaajida aan marnay waxaa kamid ahaa ISBCC- odayaasha Magaalada ay dadaal dheer u galayn saan uga samaysan lahayn lacag aruurin malin Jimce ah - Masjidka Alhamdulillah, Masjid Yusuf-Brighton, Masjid ku yaal Waltham, Masjidk ku yaal Methuen iyo Masjid ku yaal Framingham . Dhamaantoodana Allah SW waa nagu guuleeyey. Alhamdulillah
Dhinaca kale, Magaalada Mineapolis ee goblka Minnesota oo ah magaalada koowaad ee ay Somalidu ugu badan tahay Maraykanka ayaan waxaan u diray wafdi uu horkacayo Adeer Haji Yasin Iman, waxaana ku waheliyey Abdullahi Cise iyo Mohamed Ibrahim oo A.cise oo badalay markii danbe. Mudo labo billod iyo bar ayey ku maqnaayey Magaaladaas. waxay tagaan ganacsida Somalida oo qaybo kala duwan leh, Masaajidada, dadawanahay lugaynaya wadooyinka ee Somaliyeed si ay ugu soo bandhigaan Mashruuca Badbaado iyo xaaladda dag ee uu kusugan yahay. Waxaa Allah mahadii ah inay khayr kala kulmeen dhamaan bulsha wayntii Somaliyeed ee ay kula kulmeen Magaaladaas iyo magaalooyinka ka ag dhaw, aadna ay ula gurmadeen hiil iyo hooba. Mashruuca Badbaado markii Minneapolis uu gaaray sababa ay dadka aad ugu gurmadeen tab Alle marka laga reebo waxaa kamid ahaa inaysan horay u arag mashruuc noociisa oo kale ahoo gobal kale ka yimid, Magaca Badbaado oo aad usoo jiitay dadka muxsiniinta ahaa iyo Waftiga oo arintaas dhexda u xirtay isla markaaba jiif iyo joogba katagay. Alhamdullilaah
Waxaa xusid Mudan in markii November 30 ay ka dhimanayd labo (2) isbuuc waxaa naga dhimanaaa lacag gaaraysay $100,000 run ahaantiina aad loo walsalsanaa ayaa Imam Yusuf iyo Mohamed khalif oo ah Madaxwaynaha Masjidka safar ugu ambabaxeen Magaalada Seattle ee Gobalka Washington. waxaan ku wajahnaayeen Masjidka wayn ee Abu-Bakar Assadiq Islamic Center oo Imam ka yahay Sheikh Ahmed Nor. shir ay layeeshiin Sh Ahmed Noor ayaa waxay ugu sheegeen in Xalada reer Boston ay aad u cakiran tahay 2 isbuucna nooga hartay mudadii naloo qabtay inaan ku bixino lacagta dhan $600,000. Sheikh Ahmed Nour ayaan jawaab kooban siiyey Waftigii Reer Boston wuxuuna ku yiri "Bishaaraysta waad helaysaan waxa idinka dhimane"
Sheikh Ahmed oo horkaysa Waftigii reer Boston - Imam Yusuf iyo Mohamed- ayaa wax dhexg galeen Magadalada Seattle oo ah magaalada sadexaad ee Soamlida ay kugu badan tahay Maraylanka. Waxay walaalaha muxsiniinta ah ay so badhigeen mashruuca Badbaado ee reer Boston. dadaal dheer ka dib waxaa Ilaahay fadligiis ah inaan kasoo helnay reer Seattle lacagtii naga dhimanayd iyo lacag kale oo dheeraad ah oo iskugu jirta deeq iyo dayn. Madaama wakhtiga lacagta lixda boqol layska rabay ay aad u dhawayd, waftigii Badbaado horey ayey kasoo laabteen ayagoo wata lacag dhan $129,000 oo iskugu jirta deeq iyo dayn. reer Seattle aad ayey nooga fujiyeen. Ilaahay haka farxiyo walaalahaas
Sidaan horay usoo xusnay, waxaa lacag aruurinta dhinac socday qorshaha dayactirka Masjidka cusub iyo in loo soo guuro ka hor November 30-keeda. Waxaa Alle mahadii ah in Ilaahay SW uu noo yasiray dhamaan culaysyada aan ka baqaynay. labo isbuuc gududahood ayaan waxaan wda helnay Ogolaanshihii isticmaalka Masjidka cusub iyo Lacagtii ka dhimanayd lixdii boqol. Allahu Akbar...
Isniin, November 28, 2016, waxay ahayd maalinkii ugu horaysay ee Masjikeena cusub lagu oogay salaada jameeco ah. Salaadaas waxay ahayd salaada suxub (Fajar) waxaa dardaaranno kala duwan subaxdaas jeediyey qaar ka mid ahaa culimadii nagalla soo qayb gashay Mu'tamarkeenii sanadlaha oo dhamaaday habeenkii Axada (Nov 27). Culimadaas waxaas kamid ahaa Sheikh Abdullahi Ibrahim, Sheikh Abdullahi Abu-Fadli iyo Abu Osamah At-Thahabi. Ilaahay dhamaantood ha xidiyo. Sidoo kale,
Arbaco November 30, 2016, Waxaan qaadnay Check ay ku qoran tahay $600,000, waxaana u gaynayn lawyerka Masjidka si uu ugu wareejiyo mulkiilihii aan dhulka Masjidka kala wareegnay. Maalintaas waxay ahayd maalin farxad u ah dhamaan walaalaha Muslimiinta gaar ahaan walaalaha Somaliyeed ee reer Boston. waxay ahayd maalin ay rumowday riyo ay waxbadan ku taamayeen. Allahu Akbar. Ogow.. Wxaan bixinay $1Million, waxaana nagu dhiman $500,000. Isla maalinkaas, Waxaan masjidkii kasoo rarnay 3381 Washington st, Jamaica Plain waxaana usoo rarnay Dhulka cusub ee 2870 Washington st, Roxbury. Raritaanka Masjidka waxaa ka qayb qaatay dad badan oo ay kamid ahaayeen Gudiga Masjidka Hooyooyinka iyo dhalinyarada waxayna nagu qaadatay maalin dhamaystiran. Ilaahay Walaalahaas xoogooda ha u barakeeyo Maalinta qiyaamahana ajarkooda hasiiyo. Amiin
Jimce Dec 8, 2016, Wxaaa Masjidka lagu oogay